Zoe kunye neWash's Bunk FSU kunye neFAMU - I-Airbnb
Zoe kunye neWash's Bunk FSU kunye neFAMU
Le bhedi inkulu yokumkanikazi inendawo eyaneleyo yokuba iindwendwe ezimbini zilale kamnandi. Yonwabela ixesha elincinane lokuphumla kwaye emva koko uhlolisise isixeko. Ulungile entliziyweni yayo yonke into.
Le bhedi ye-queen size yindawo yokulala ekhululekile endlwini. Zininzi iidrowa kunye nendawo yegunjana ukuba uyathanda ukukhulula. Umabonwakude oneRoku ulungiselelwe ukuzonwabisa kwakho. INetflix iphakathi kokhetho. Kukho igumbi lokuhlambela elinye lendlu.
4.75 · Izimvo eziyi-57
Ubumelwane bukulungele ukuhamba nokukhwela ibhayisekile. Ukuba ubheka ngasentshona ungahamba uye kwiLebhu yeMagnetic yeSizwe. Malunga nesiqingatha semayile ukuya emantla kukho indlela egangathiweyo ejikeleze iLake Elberta. Kuhle kusasa.
Indawo yeDolophu yaseKholeji ikufuphi kwaye ibonelela ngeevenkile, ukutya kunye nokonwabisa iklabhu yasebusuku. Ungafumana ukutya kuloo ndawo kude kube ngu-3 AM. Ndazise ukuba ufuna iingcebiso ezihambelana nezinto ozithandayo!
Intsebenziswano ilawulwa nguwe ngokwenene. Kuzo zonke iindawo zam kukho abantu abahlala kwindawo yokubonelela ngoqhagamshelwano kunye nolwazi ngexesha lokuhamba kwakho. Esithubeni sakho nguDavide. Uyakwazi ukuphendula imibuzo aze anikele ukhokelo. Ndihlala ndifumaneka
Unayo yonke into oyifunayo kwigumbi lakho, kodwa wamkelekile ngakumbi ukuba uhlale ekhitshini nakwigumbi lokuhlala.
Ukungeniswa: Ukuba unexesha ekuvunyelwene ngalo elicwangciselwe ukufika ke uya kubuliswa. Ukuba akunjalo ke uya kunikwa ikhowudi kwibhokisi yesitshixo ukuze ukwazi ukungena endlwini.
Kukho elinye igumbi leendwendwe ngoko ngexesha lokuhlala kwakho uya kuba nakho ukunxibelelana nomnye umhambi.
Intsebenziswano ilawulwa nguwe ngokwenene. Kuzo zonke iindawo zam kukho abantu abahlala kwindawo yokubonelela ngoqhagamshelwano kunye nolwazi ngexesha lokuhamba kwakho. Esithubeni…